जिल्ला अदालतको फैसला : बलात्कार घटनामा वयान फेर्ने महिलालाई पनि सजाय
रोनाल्डोलाई पेनाल्टी हान्न नदिँदा युनाइटेड पराजित
श्वेताको उजुरीपछि काजी पक्राउ ! गरेछन् गर्नै नहुने यस्तो काम
कमिसन नदिएको भन्दैमेयरले अधिकृतलाई कुट्न मान्छे नै लगाए !
के पुरुषको कारणले हुन्छ महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
प्रा.डा. सुमनराज ताम्राकार
शनिवार, फाल्गुन ८ २०७७
प्रत्येक वर्ष जनवरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरसम्बन्धी जनचेतना महिनाका रुपमा मनाइन्छ । फेब्रु्अरी ४ मा भने विश्व क्यान्सर दिवस मनाउने गरिन्छ ।
पछिल्लो नेपाली तथ्याङ्क अनुसार पुरुषमा मुुख्यतयाः फोक्सो, आमाशय, कलेजो, मुखको क्यान्सर बढी देखिएको छ । महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर बढी हुने गरेको छ ।
सामान्य अवस्थामा शरीरमा कोषबन्ने र निश्चित समयपछि योजित तवरले नष्ट हुने प्रक्रिया जारी रहन्छ । यदि कुनै कारणले कोष विभाजनमा विचलन आएमा वा क्रमभङ्ग भएमा कोष तथा तन्तु बन्ने र नष्ट हुने प्रक्रियामा खलल पुग्छ । यसको परिणाम स्वरुप अनियन्त्रित रुपमा कोष विभाजन हुने प्रक्रियालाई ट्युमर भनिन्छ ।
साधारण र खतरनाक (जटिल) खालको गरी ट्युमर पनि दुई खालका हुन्छन् । खतरनाक खालको ट्युमरलाई नै क्यान्सर भन्ने गरिन्छ । क्यान्सरको समयमै उपचार गरिएन भने क्यान्सर लागेको अङ्गका नजिकका तन्तुलाई पनि यसले बिस्तारै असर गर्न थाल्छ । क्यान्सरको प्रकार अनुसार रगत, लिम्फ आदि माध्यमबाट शरीरको अन्य भागमा पनि पैmलिन गई विरामीको मृत्यु पनि हुन्छ । नसर्ने रोगहरु मध्ये क्यान्सर एउटा जटिल रोग हो ।
क्यान्सर किन हुन्छ ठ्याक्कै भन्न नसकिएपनि ९० प्रतिशत क्यान्सर अस्वस्थ्यकर खानपिन, रहनसहन, वातावरणीय प्रभावले हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस बाहेक १० प्रतिशतमा उमेर, लिङ्ग, वंशाणुगतर जातिको भूमिका छ ।
साधारण भाषामा बासी तथा ढुसी परेका खाना, पोलेर डढेको मासु, सेकुवा उपभोग, कीटनाशक एवं रासायानिक मल प्रयोग गरिएका खाद्यपदार्थ उपभोग, सानै उमेरदेखि तथा अधिक धूमपान, मद्यपानको सेवनले पनि क्यान्सर रोगीको सङ्ख्या बढेको छ ।
विश्वमा प्रतिवर्ष पाँच लाख मानिसलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गर्दछ । अन्दाजी दुई लाख महिलाको यो रोगबाट मृत्यु हुन्छ । नेपालमा वर्सेनी करिब तीन हजार महिलामा यस प्रकारको क्यान्सर लाग्छ भने दुई हजार जतिको मृत्यु यसै कारणले हुने गरेको छ ।
कुनै निश्चित कारणले पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन्छ भनेर किटान गर्न नसकिने भए पनि करिब ७० प्रतिशत पाठेघरको मुखको क्यान्सर एचभीपी (ह्युमेन पापिलोमा भाइरस) सँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ । पाठेघरको मुखको कोषिकाको प्रोटिनसँग एचभीपीको प्रोटिनबीच रासायानिक प्रक्रिया हुँदा ती कोषिकामा परिवर्तन आउन थाल्छ र त्यस अवस्थाले क्यान्सर सिर्जना गर्दछ ।
यौनिक रुपमा सक्रिय भएको केही समयमै एचपीभीबाट सङ्क्रमित हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले एचपीभी सङ्क्रमण यौनजन्य सङ्क्रमणमध्ये प्रमुख हो । तर जनमानसमा एचपीभी यौनसम्पर्ककै कारण सर्छ भन्ने भ्रम छ । सत्यता के हो भने यो सङ्क्रमण यौन सम्पर्कका बेला छाला छाला बीचको सम्पर्कको कारण सर्दछ ।
जुन योनि–लिङ्ग मैथुन, मुख मैथुन वा गुद्द्वार मैथुनका बेला बढी हुन्छ । यौन सम्पर्कका कारण एचपीभी नसर्ने भए कण्डमको प्रयोगले कसरी एचपीभी सङ्क्रमणको सम्भावना घटाउँछ भन्ने तर्क पनि हुनसक्छ । खासमा पुरुष लिङ्गको टुप्पाको छालामा बढी जसो एचपीभी रहने हुनाले यौनसम्पर्कका बेला कण्डमको प्रयोगले सङ्क्रमणबाट जोगिन सहयोग गर्दछ ।
यौनिक रुपमा सक्रिय करिब ५० देखि ८० प्रतिशत महिला वा पुरुषकोजीवनमा एक न एक पटक एचपीभी सङ्क्रमण भएकै हुन्छ । जसरी कोरोना सङ्क्रमित सबैमा लक्षण चिन्ह नै देखापर्दछ भन्ने भएन त्यसरी नै एचपीभीबाट सङ्क्रमित सबैमा जननेन्द्रियको क्यान्सर हुनैपर्दछ भन्ने छैन । सामान्य र गम्भीर खालका गरी दुई प्रकारका एचपीभी हुन्छन् ।
गम्भीर खालकै एचपीभीबाट सङ्क्रमित भएको भए पनि बिना उपचार पनि आफै सङ्क्रमण निको हुन्छ । एचपीभी धेरै प्रकारका हुन्छन् तर १३ प्रकारका भाइरसले मात्र पाठेघरको मुखको क्यान्सर निम्त्याउँछन् । एसियामा ८३ प्रतिशत पाठेघरको मुखको क्यान्सर एचपीभी– १६ तथा एचपिभी–१८ को सङ्क्रमणले भएको पाइएको छ ।
यसरी ह्युमेन पापिलोमा भाइरसलाई प्रमुख कारक तत्व मानिएपनि कम उमेरमा विवाह हुनु, कम उमेरमै यौन सम्पर्क स्थापित हुनु, एक भन्दा बढी जना सँग यौनसम्पर्क राख्नु, कम उमेरमा अनि धेरै बच्चा पाउनु, आफ्नो गोप्य अङ्गको उचित सरसफाई नगर्नु, चुरोट, खैनी तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नु, यौनरोग एवं गुप्ताङ्ग सम्बन्धी दीर्घरोगी हुनु पाठेघरको मुखको क्यान्सर लाग्नाको अन्य कारण हुन् ।
धुमपान गर्नेहरुमा एचपीभी सङ्क्रमण लामो समयसम्म रहिरहन्छ भने धुमपानकै कारण पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर र यौनाङ्ग वरिपरि क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ । धार्मिक रुपमा सानैमा केटाको लिङ्ग वरिपरि छाला ताछेर फ्याँक्ने यहुदी एवं मुस्लिम समुदायका महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर कम हुने गरेको पाइएको छ । अधिकतर एचपीभीबाट सङ्क्रमित मानिसले थाहै नपाई आफ्नो यौन साथीमा एचपीभी सारिरहेको हुन्छन् । किनकि तिनीहरु आफैँलाई आफू एचपीभीबाट सङ्क्रमित छु भन्ने छैन हेक्का हुँदैन ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरको आरम्भिक अवस्थामा कुनै लक्षण नदेखिन सक्छ । प्रभावित महिलामा असामान्य रगत तथा रगत मिसिएको गन्हाउने योनीश्राव देखा पर्ने पनि हुन्छ । त्यसैगरी यौनसम्पर्क पश्चात् रगत देखा पर्ने वा महिनावारी पनि धेरै दिनसम्म वा बढी मात्रामा रगत बग्न सक्ने हुन सक्छ । प्रारम्भिक अवस्थामा कुनै पीडा नभएपनि क्यान्सर पैmलिसकेपछि भने पीडा हुन थाल्छ । पछि खुट्टा सुन्निने, पेट फुल्ने, पिसाब नहुने, कम्मरको हड्डी दुख्ने आदि लक्षण देखिन सक्छन् ।
नियमित स्वास्थ्य जाँचको क्रममा प्याप स्मियर नामक स्क्रिनिङ विधिबाट पाठेघरको मुखको श्राव निकाली क्यान्सर छ, छैन थाहा पाउन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त एसिटिक एसिड वा ल्युगोल आयोडिनको प्रयोगबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । विवाह गरेको दुई/तीन वर्षदेखि नै नियमित रुपमा स्क्रिनिङ गराउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
विकसित देशहरुमा ह्युमेन पापिलोमा भाइरसविरुद्ध खोप लगाउने गरिन्छ । साधारणतया ११/१२ वर्षका किशोरीलाई छ महिनाको अवधिभित्र तीन डोज खोप लगाउने अभ्यास छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारक तत्व, लक्षण चिन्ह र रोकथाम माथि विचार गर्दा पुरुषको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । बालविवाह गर्ने वा गराइ दिने, बहुविवाह गर्ने, विवाहइत्तर धेरै महिलासँग यौन सम्बन्ध राख्ने कार्यमा पुरुषको मुख्य भूमिका हुन्छ । त्यस्तै यौन सम्पर्कपूर्व आफ्नो यौनाङ्गको सरसफाई गर्ने तथा कण्डमको प्रयोग गर्ने कार्यमा पुरुषले अल्छी गर्दा पनि यो समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।
आफ्नी छोरीचेलीलाई एचपीभीविरुद्ध खोप लगाइदिने तथा आफ्नो महिला यौन साथीलाई विवाहको केही वर्ष भित्रै पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ गराउन लाने जिम्मा पुरुषकै हो । तर कुनै समस्या नभइकनै आफ्नो श्रीमतीलाई नियमित स्वास्थ्य जाँचमा लाने त कुरै छाडौैँ महिनावारी गडबडी भएको, बढी रगत बग्न थालेको वा गन्हाउने पानी बग्न थालेको गुनासो गर्दा पनि वास्ता नगर्ने पुरुष पनि हुन्छन् ।
छोरा नपाएसम्म धेरै बच्चा पाइरहन दवाब दिने पुरुष पनि देखिएका छन् । यसले पनि महिला पाठेघरको मुखको क्यान्सरको थप जोखिममा पर्दछन् । पुरुषले आपूm मात्र धुमपान, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरी आपूmलाई विभिन्न रोगको जोखिममा पार्ने मात्र नभई महिलालाई समेत खतरामा पार्छन् र उनीहरुलाई ती पदार्थ सेवन गर्न उक्साउँछन् पनि ।
यसरी पाठेघरको मुखको क्यान्सर प्रत्यक्षतः महिलाको समस्या भएपनि यो समस्या हुनुमा तथा रोकथामको पहल नगराउनुमा, समयमै जाँचका लागि नलानुमा, आवश्यक उपचार नगराउनुमा पुरुषकै अहम् भूमिका छ । अतः महिलालाई यो प्राणघातक समस्याबाट जोगाउनु छ भने पुरुषले निर्णायक एवं परिणाममुखी पहल लिनै पर्दछ ।
युवामञ्च, २०७७, फागुन
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, फाल्गुन ८ २०७७ १२:१६:१४
चीनद्वारा नेपाललाई थप १ लाख डोज खोप सहयोग
तीन जिल्लाका लक्षित जनसंख्यामा पूर्ण खोप लगाईयो
कुन उमेरसमूहमा कति घण्टा सुत्ने ?
सिन्धुपाल्चोक केन्द्र बनाएर भूकम्पको धक्का